ROBO: Sidee Dukaameystayaasha Maanta ay wax ugu baaraan internetka oo ay ku iibsadaan qadka la'aan | Martech Zone
In kasta oo aan sii wadno inaan wax weyn ka qabanno koritaanka iibka khadka tooska ah, waxaa muhiim ah in la xusuusto in 90% iibsadaha macaamiisha wali lagu sameeyo meheradda tafaariiqda. Taasi macnaheedu maahan in khadka tooska ah uusan saameyn weyn ku yeelan - waa mid saameyn ku leh. Macaamiisha wali waxay rabaan ku qanacsanaanta ee eegida, taabashada iyo tijaabinta-wadida sheyga kahor inta aysan bixin.
ROBO maahan wax cusub, laakiin waxay caadi ka noqotay safarka macaamiisha safarkooda iyo fursad weyn oo loogu talagalay shirkadaha iyo dukaamada si ay si fiican ugu fahmaan sida iibsadayaashu wax u dukaameystaan.
ROBO Maxay U Taagantahay?
Ku baar khadka tooska ah, Soo iibso qad la'aan
Waa maxay ROBO?
ROBO waa dabeecad macaamil halkaas oo ay uga faa'iideystaan ​​waxyaabaha ay soo saaraan macaamiisha sida dib u eegista, qoraalada boggaga, iyo fiidiyowyada si ay uga caawiyaan go'aankooda iibsashada. Markii la go'aansado, iyagu wax kuma iibsadaan khadka tooska ah - waxay booqdaan meherad tafaariiqeed oo wax iibsadaan.
Bazaarvoice waxay cilmi baaris ku sameysay hab dhaqanka macaamiisha 20+ ee tafaariiqleyda aduunka ugu waa weyn Waqooyiga Ameerika, EMEA, iyo APAC, guud ahaan 100 magacyada iyo qeybaha si ay u fahmaan inta jeer ee dukaameysadu raadsadaan waxyaabaha macaamiisha soo saaraan (CGC) kahor intaysan iibsan qadka ama dukaanka, iyo infographic wadaagaa natiijooyinka, oo ay ku jiraan:
39% iibsadayaasha dukaanka ayaa aqriya dib u eegista internetka kahor iibsiga
45-55% iibsadayaasha dukaanku waxay akhriyaan dib u eegista waxyaabaha tikniyoolajiyada tikidhada waaweyn
58% iibsadayaasha dukaanka waxay aqriyaan faallooyinka caafimaadka, jir dhiska & walxaha quruxda
Xaqiiqdii, 54% iibsadayaasha khadka tooska ah waxay akhriyaan dib u eegista kahor iibsiga Faahfaahinta faahfaahinta waxay kuxirantahay kala duwanaanshaha B2B iyo B2C waxayna jabinaysaa saamaynta qaybta sheyga
Tags: baasaarvoicewaxyaabaha macaamiisha soo saaraandib u eegista macaamiishabaaritaan ku samee internetkacilmi baarista khadka tooska ah ka iibso khadka tooska ahReviewsdhacuGCwaxyaabaha ka kooban isticmaale
Sidee Istaraatiijiyadaada Warbaahinta Bulshada ee B2B ay uga duwanaan kartaa Istaraatiijiyada B2C
Nov 22, 2016 at 7: 37 AM
Boostada heer sare ah!
Xaqiiqdii, macluumaadkaas muuqaalka ah ee aad soo bandhigtay ayaa ku filnaaday in la fahmo sida dadka wax iibsanaya ee kuwan ay u adeegsadaan ROBO. Tani waxay ahayd mid waxtar badan leh.
Sababtoo ah kama aanan warheynin in ROBO ay isu rogeyso halbeeg ka mid ah safarka iibsashada macaamiisha iyo suurtagalnimada weyn ee la xiriirta magacyada iyo baayac mushtarka oo leh ujeedo ah in la wanaajiyo fahamkooda si sax ah habka ay iibsadayaashoodu u maraan dukaamaysiga.
Aad baad u mahadsantahay Douglas!
Aad baa loogu riyaaqay faahfaahinta qiimaha leh.